एजेन्सी–कुनै पनि स्वार्थी मानिससँग जीवन काट्न एकदमै गाह्रो काम हो । जो मान्छे आफ्नो बारेमा मात्र सोच्छ र अरुको वास्था नै गर्दैन त्यस्ता मानिसहरुका कारण जीवनमा धेरै समस्याहरु आइपर्ने गर्छन् । विस्तृतमा
मुकेश अम्बानीका सबैभन्दा महङ्गा ११ चीज, जुन हरेक मानिसको सपना
यी राशिका मानिसलाई पत्नीको आवाज दबाउने खालको पुरुषको रुपमा लिइन्छ
जब महिलाहरु ओठ नै सिलाएर विरोधमा उत्रिए
एजेन्सी । विश्वमा अनेकौं प्रकारका विरोध प्रदर्शन हुने गरेको पाइन्छ । कसैले नग्न भएर त कसैले भिन्न वस्त्र लगाएर विरोध गर्ने गर्दछन् । अफ्गानिस्तानको राजधानी काबुलमा ११ महिलाहरुले चुनावमा धांधली भएको भन्दै राष्ट्रपति भवन अगाडि विरोध प्रदर्शन गरे । जसमा चार महिलाको ओठ सिलाएको थियो ।
प्रदूषणले बच्चाहरुको ‘आईक्यू’ सात अङ्कसम्म घटाउन सक्ने !
एजेन्सी । प्रदूषण कतिसम्म खतरनाक हुन्छ भनेर सामान्य मानिसले अन्दाज लगाउन सक्दैनन् । प्रदूषणले बाल मनोविज्ञानमा सिधा असर पुर्याउने देखिएको छ । यसैगरी उनिहरुको दिमागमा नकरात्मक असर पर्ने पनि एक अध्ययनले देखाएको छ । क्यालिफोर्निया युनिभर्सिटीले गरेको पछिल्लो अनुसन्धानले उल्लेख गरेको तथ्याङ्कअनुसार प्रदूषणले बच्चाहरुको आईक्यू सात अङ्कसम्म घटाउन सक्नेछ । इन्भाइरोमेन्टल रिसर्च नामक प्रत्रिकामा प्रकाशित उक्त अध्ययन अनुसार प्रदूषित स्थानमा बस्ने महिला गर्भवती हँुदा प्रदूषणले गर्दा त्यसको नकरात्मक असर गर्भमा रहेको बच्चालाई पनि पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
जान्नुहोस् कस्तो नाक हुने व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
ड्रग्स तस्करलाई सहयोग गर्ने सुगा प्रहरी नियन्त्रणमा
एजेन्सी । लागु औषध तस्करलाई निरुत्साहित गर्न विश्वभर कडा कानुन बनाइएका छन् ।
महिलाको कानभित्र माउसुली पसेपछि...
एजेन्सी । थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा एक डाक्टरले बिरामीको कानबाट जिउँदो माउसुली निकालेका छन् । महिलाको कानमा विगत दुई दिनदेखि चिलाईरहेको र कानमा एकदम पीडा भएपछि उनी डाक्टरकोमा पुगेकी थिइन् ।
एक यस्ता राजा जसले कारहरु किन्नमै ५ अर्व अमेरिकी डलर खर्च गरे
यसरी उत्तर कोरियाले बनायो खान मिल्ने कपडाहरु
एजेन्सी । उत्तर कोरियाबारे केही अजबगजबका कुराहरु बाहिर आइनै रहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय केही यस्तै कुरा बाहिर आएको छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार उत्तर कोरियाले खाद्यान्न संकटलाई मध्यनजर गर्दै खान मिल्ने कपडा बनाएको छ । उत्तर कोरियाली सरकारले खान मिल्ने कपडाको एक संरचना तयार पारेको हो ।
मरेको बाघको जुगाँ उखेलेपछि..
बर्दिया । बाघको जुँगा उखेल्दा जरिवाना । सुन्दै अचम्म लाग्ने । यो घटना हो गेरुवा गाउँपालिकाको । जिल्लाको गेरुवा गाउँपालिकाका एक व्यक्तिले बाघको जुँगाका कारण पाँच लाख जरिवाना तिर्नुपरेको छ ।